Tag: tụgharịa mgba ọkụ | Martech Zone
Tag: tụgharịa mgba ọkụ
Ọ bụrụ n’igebeghị pọdkastị, a ga m agba gị ume. Budata Stitcher ma ọ bụ jiri ekwentị mkpanaaka gị ma ọ bụ jiri desktọọpụ nke desktọọpụ gị. iTunes ma ọ bụ Google Play ga-ekwe ka ị chọọ na denye aha na ha dị ka mma. N'abalị ụnyaahụ, anyị nwere mkparịta ụka dị ukwuu na onye ndu mpaghara nke na-azụ ọzụzụ maka obere marathon mbụ ya na 58 afọ. O kwuru na, na ọzụzụ, otu n’ime ihe kachasị mma ọ rụtụrụla bụ ịda ụda